Resabe Taorian’ny Fandresen’ilay Sarimihetsika Timbuktu · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2015 11:39 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, عربي, فارسی, Español, Français
Ny sarimihetsika novokarin'ilay Maoritaniana Abderrahmane Sissako no nandresy tamin'ny Lanonana Césars andiany faha-40, natao tao amin'ny teatra Châtelet tao Parisy ny 20 sy 21 febroary 2015. Mitontaly fito ny loka azony, dia ny an'ny mozika tsara indrindra, ny feo tsara indrindra, ny sary tsara indrindra, ny fikirakiràna sary tsara indrindra ary ny mpanatontosa mendrika indrindra.
Tao Frantsa, nitehafan'ny mpijery ihany koa ilay sarimihetsika. Izany tokoa, efa nahatratra ho iray tapitrisa sahady ny isan'ny fidirana nijery azy, isan'ny mpanotrona izay tsy mbola nisy sarimihetsika afrikana nahatratra izany tany aloha tany.
Ny 28 Martsa 2015, Charles Sanches, ilay mpitolona ho an'ny zon'olombelona, mipetraka any Dakar, dia nanome ihany koa ny fomba fijery miabo avy aminy momba ilay sarimihetsika :
Io fanehoankevitra avy aminy io dia narahan'ireo fanehoankevitra marobe avy amin'ireo namany ao amin'ny Facebook. Nanoratra i Sid-Lamine Salouka hoe:
FALY!!! Faly manokana mihitsy aho! Nolazain'ireo manakiana azy ho mpiara-dia amin'ny mpitondra Maoritaniana nefa tsy miresaka ilay sarimihtesika akory fa hoe tsy misy dikany sy mirefarefa amin'ny tany ilay sarimihetsika novokarin'i Sissako. Mampiantso an'i Césaire aho (sy ny Taratasiny ho an'i Maurice Thorez) mba hitenenana hoe tsy antoky ny fananana fisainana tsara na sertifikà manohitra ny fiahiana. Charles Sanches, nanome alina tony ho ahy ianao.
Nivaky i Lamine Fall fa misy nankafiziny ny sasany amin'ny endrik'ilay sarimihetsika, saingy mbola kianiny ny sasany:
Mia Toure, namany iray monina ao Dakar no nanoratra hoe :
Miezaka manazava io fahombiazana io amin'ny alàlan'ny dindon'ny politikan'ny governemanta frantsay amin'ny resaka ady atao amin'ireo mpivavaka mpanao an-tendrony ny sasany amin'ireo mpamadibadika sarimihetsika. Toy ny nataon'i Kassin, ao amin'ny malijet.com, izay manentana ireo mpiray firenena aminy fa :
Ao amin'io tranonkala io ihany, KIBILLY SOUSSOKHO no mampivoitra ireo endrika politikan'ilay sarimihetsika Timbuktu:
Betsaka tamin'ny ampahan'ilay sarimihetsika no navoaka tao amin'ny Youtube, niteraka fanehoankevitra marobe. Saingy mizarazara be ihany ny fomba fijery. Tamin'ny fetiben'ny sarimihetsika afrikana natao tany Ouagadougou, ny FESPACO, niteraka resabe marobe ny fanolorana io sarimihetsika io, nanomboka tamin'ny fotoana handefasana azy, noho ny risika mety hisian'ny fanafihana mety haterak'izany. Nilaina hatramin'ny firotsahan'ny governemanta tetezamita mihitsy mba haneken'ireo mpikarakara azy.